Oman nkwari akụ Oman: Ọga n'ihu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Oman nkwari akụ Oman: Ọga n'ihu?
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ Oman • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'agbata afọ 2013 na 2017 ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na nkwari akụ na Oman mụbara site na 35%, dị ka National Center for Statistics and Information (NCSI) si kwuo.
Ebe Oman na -enwe mmụba na -aga n'ihu na ndị na -abata njem nlegharị anya, afọ ndị na -adịbeghị anya ahụla mmụba nke nhọrọ ụlọ.
Ebe obibi ọzọ-dị ka ụlọ mgbazinye ezumike na ohere ezumike nwa oge-na-apụtawanye ìhè n'ahịa. Ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya nọ na ala ala maka oge a, na -efegharị na nkezi n'etiti 50% na 60%, dịka pipeline nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ọhụrụ na -aga n'ihu na -enye ndị ọbịa ihe ọzọ ma na -eme asọmpi dị elu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị nọ na mpaghara ahụ nwere nchekwube ma na -ebu amụma na ndị nwere ike ịnọ n'egwuregwu ahụ ga -enweta nnukwu uru na ọkara ruo ogologo oge.
Muscat, isi obodo Oman, abụrụla ebe mbata na mba ahụ na ọtụtụ nhọrọ ụlọ. Dabere na data NCSI, n'ime ụlọ nkwari akụ 359 dị na Oman na 2017, 142 dị na Gọvanọ Muscat. N'ime ụlọ nkwari akụ ndị ahụ, itoolu bụ nkewa ise dịka kpakpando ise, 12 bụ kpakpando anọ, 16 nwere kpakpando atọ na 21 bụ akara kpakpando abụọ, ebe nke ọzọ bụ nke "nke ọzọ"-ijikọta ụlọ ọrụ otu kpakpando, ụlọ oriri na-edozighi aha ya na ihe ọzọ. ulo. Colliers International na-akọ na Muscat nwere ụfọdụ igodo 10,924 na njedebe nke 2017, mmụba nke ihe dịka 11% afọ-na-afọ (yoy).
Mgbe a na-ele ndakpọ nke NCSI nke ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọultanụ hotelsụ na sultanate na 2017, 5% ka ekepụtara dịka kpakpando ise na 7% bụ kpakpando anọ, ebe 68% dabara na ụdị '' ọzọ ''. Na mpụga isi obodo, ndị gọvanọ na-enye ụlọ oriri nwere kpakpando ise bụ Al Batinah North nwere abụọ, Musandam na Ad Dakhiliyah nwere otu, Dhofar nwekwara anọ. N'ihe banyere uto n'otu ọ bụla, ọnụ ọgụgụ ụlọ nkwari akụ ise dị na mba ahụ dum sitere na 12 ruo 17 n'ime afọ n'etiti 2013 na 2017, ebe ntọala kpakpando anọ toro site na 22 ruo 24. N'aka nke ọzọ, ọnụọgụ atọ -nhọrọ nke kpakpando na kpakpando abụọ ha abụọ, site na 28 ruo 26 na site na 52 ruo 49, n'otu n'otu, na-egosi ngbanwe site na etiti. Otu kpakpando na ebe ekewaghị ekewa, ka ọ dị ugbu a, gbatịrị site na 152 ruo 243. Dị ka Ministry of Tourism (MoT) si kwuo, ọnụ ọgụgụ ụlọ niile dị na sultanate mụbara site na 9.3% na 2017 wee ruo 20,581, ebe ọnụ ọgụgụ akwa bilitere site na 29,538. bụ 31,774.
Pịa ka ị gụọ akụkọ zuru oke na Oxford Business Group
gbarie isi obodo Category Center mpi gara n'ihu data njedebe ntinye mgbasa kpakpando ise Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ise kpakpando anọ full game ezumike home nnukwu mụbara Igodo ndina -achọ ala ozi Ozi nke Njegharị Muscat ohuru ohuru North obibi àjà Oman nhọrọ n'èzí Oxford pipeline udu -adịbeghị anya mgbazinye akụkọ ụlọ bilie akuku mgbanwe obere Star kpakpando ọnụ ọgụgụ -anọ adigide ibu na -adigide okwu okwu Mba njem ndị njem ezumike ezumike mgbazinye Y